Tavoahangy famolavolana manokana, tavoahangy Vodka, tavoahangy Whisky - Chengfeng
Mandray anjara amin'ny fiainana madio sy madio kokoa ny fitaratra fitaratra!
Fitsangatsanganana an-dranomasina, firaisankina sy fandrosoana, fahamarinana ary tombony miaraka, fandraisana andraikitra!
Ho tonga mpanamory ny indostrian'ny fanamboarana vera afovoany avo lenta, hanisy fahasamihafana amin'ny fanaingoana manokana, ary hahatonga ny marika ho sarobidy kokoa!
Vata fitaratra avo lenta
Tavoahangy fitaratra misy alikaola 750ml
Mifantoka amin'ny famolavolana sy fanamboarana karazan-tavoahangy misy alikaola fitaratra izahay amin'ny alàlan'ny fepetra takinao amin'ny antsipiriany. Manomboka amin'ny tavoahangy alikaola bitika kely 50ml ka hatramin'ny 1.5L, ary ny safidy eo anelanelan'ny satroka, ny tampon'ny volo, ary ny boloky, dia azonao atao ny manamboatra tavoahangy toaka tsy manam-paharoa ho an'ny marikao miaraka amina baiko kely.
750ml tavoahangy misy alikaola misy rindrina roa rindrina
Fanaingoana fitifirana, fanapahana, pirinty lamba vita amin'ny lamba landy, fametahana sary, fasika, fametahana loko, firakotra fanala, fitaratra, pate-surpate, filaharana amin'ny fitifirana volamena sy glasy.
300ml vera divay
Ny Stemless Aerating Wine Glass dia mitondra fampiasa amin'ny fironana mahazatra amin'ny famolavolana vera divay. Tena vita tanana, ity sambo patanty ity dia manolotra fomba tena tokana sy kanto hanondrahana ny divay na ny fanahinao. Araraka mivantana ao amin'ny sela misy aeration miorina ao afovoan'ny vera. Ny divay dia hivoaka, ka hiteraka divay miharo 7oz izay vonona hampifaly ny paleta anao. Mampiasà ranomandry iray ao anaty aotterra handefasana divay fotsy, whisky, na kocacac rehefa mangatsiaka. Azo antoka ny fanasana lovia.
Guangzhou ChengFeng Brothers Industrial Company Limited dia orinasa iray manandanja manokana amin'ny famokarana, famolavolana ary fikarohana ireo vera afovoany avo lenta. Ny karazana vokarinay dia misy solomaso fanomezana fampiroboroboana sokajy divay, tavoahangy fitaratra sokajy sokajy divay, tavoahangin-drano fitaratra, fitoeran-tsakafo fitaratra, ary vokatra fitaratra hafa mahazatra.
Ny orinasanay dia any Guangzhou China, miaraka amin'ny fifamoivoizana mety sy ny logistika haingana, azonao atao ny misafidy eo amin'ny lalamby, rivotra, fitoeran-dranomasina ary fitaterana an-tanety. Ny toerana misy anay dia akaikin'ny seranan-tsambon'i Huangpu sy Nansha, ny entana dia azo entina amin'ny toerana manerana an'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny kaontenera. Miezaka izahay mamorona marika vaovao manerantany amin'ny indostrialy fitaratra fitaratra antonony miaraka amina ekipa matihanina, fitantanana matanjaka sy fitaovan'ny mpisava lalana.